LiveCasino.ie Soho Office 3A၊ Edge Water Complex၊ Elia Zammit လမ်း၊ စိန့်ဂျူလီယန်နိုင်ငံ၊ ProgressPlay လီမိတက်မှလည်ပတ်သည်။ ProgressPlay သည်မော်လ်တာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကန့်သတ်ထားသောတာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် (C58305), ၎င်းသည်လိုင်စင်နှင့်မော်လ်တာဂိမ်းကစားခြင်းအာဏာပိုင်များမှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 16ပြီ ၁၆ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော MGA / B2C / 231/2012 လိုင်စင်နံပါတ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်; ProgressPlay Limited is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. Gambling can be addictive. Play responsibly.